မိန်းမအကြောင်းမသိတဲ့ ယောကျာ်လေးတွေအတွက် ဖတ်ရအဆင်ပြေစေမယ့် ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စာအုပ်
ခုဖော်ပြမယ့်အကြောင်းကတော့ခေါင်းစဉ်မှာမြင်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲယောကျာ်းလေးတွေအတွက်ထုတ်ဝေထားတဲ့စာအုပ်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးဟာ ယော‌ကျာ်းလေးတွေအနေနဲ့ မိန်းကလေးတွေအကြောင်း သိသလောက်အကုန် ရေးသားပြီး ထုတ်ဝေထားတဲ့ စာအုပ်တစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်အားအကောင်းဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပြီး အကြိမ်ရေတော်တော်များများ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့ရပါတယ်။
Everything Men Know About Women လို့အမည်ရတဲ့ ဒီစာအုပ်ဟာ စာရေးဆရာ Dr. Alan Francis ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပြီးစာမျက်နှာပေါင်း ၁၀၀ ရှိကာ စာအုပ်အတွင်းပိုင်းမှာ ဘာဆိုဘာမှကို မရေးထားပဲ ဒီအတိုင်းပြောင်ကြီးပဲ ထုတ်ဝေထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာဟာ ဒီစာအုပ်ထွက်ရှိလာဖို့အတွက်မိန်းကလေးထောင်ပေါင်းများစွာကိုအချိန်ယူလေ့လာကာမေးမြန်းပြီးသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံး သုတေသနအပြီးမှာတော့ စာအုပ်ထဲမှာ ဘာမှမရေးတော့ပဲ ဒီအတိုင်း စာရွက်ပြောင်ကြီးပဲ ထုတ်ဝေလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နာမည်ကြီး Online Shoppingတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Amazon ကတော့ ဒီစာအုပ်ဟာ အမျိုးသမီးတွေ သူတို့ရဲ့ လက်တွဲဖော်ယောကျာ်းလေးတွေကို ပေးဖို့ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့တောင် ညွှန်းထားပါတယ်။ တစ်ကယ်ပဲ ဒီစာအုပ်ထဲကအတိုင်းမိန်းကလေးတွေအကြောင်းဟာ ရေးသားလို့မကုန်နိုင်ဘူးလားဆိုတာ ဖြေခဲ့ပါအုန်း ပရိသတ်ကြီးရေ….
ခုေဖာ္ျပမယ့္အေၾကာင္းကေတာ့ေခါင္းစဥ္မွာျမင္ခဲ့ရတဲ့အတိုင္းပဲေယာက်ာ္းေလးေတြအတြက္ထုတ္ေဝထားတဲ့စာအုပ္အေၾကာင္းေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီစာအုပ္ေလးဟာေယာ‌က်ာ္းေလးေတြအေနနဲ႔မိန္းကေလးေတြအေၾကာင္းသိသေလာက္အကုန္ ေရးသားၿပီး ထုတ္ေဝထားတဲ့ စာအုပ္တစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္အားအေကာင္းဆုံးစာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ၿပီး အႀကိမ္ေရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေဝခဲ့ရပါတယ္။
Everything Men Know About Women လို႔အမည္ရတဲ့ဒီစာအုပ္ဟာစာေရးဆရာDr.AlanFrancisရဲ႕လက္ရာျဖစ္ၿပီးစာမ်က္ႏွာေပါင္း ၁၀၀ ရွိကာ စာအုပ္အတြင္းပိုင္းမွာ ဘာဆိုဘာမွကို မေရးထားပဲဒီအတိုင္းေျပာင္ႀကီးပဲထုတ္ေဝထားတာျဖစ္ပါတယ္။စာေရးဆရာဟာ ဒီစာအုပ္ထြက္ရွိလာဖို႔အတြက္ မိန္းကေလးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကိုအခ်ိန္ယူေလ့လာကာေမးျမန္းၿပီးသုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး သုေတသနအၿပီးမွာေတာ့ စာအုပ္ထဲမွာ ဘာမွမေရးေတာ့ပဲ ဒီအတိုင္း စာ႐ြက္ေျပာင္ႀကီးပဲ ထုတ္ေဝလိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
နာမည္ႀကီးOnlineShoppingတစ္ခုျဖစ္တဲ့Amazonကေတာ့ဒီစာအုပ္ဟာအမ်ိဳးသမီးေတြသူတို႔ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္ေယာက်ာ္းေလးေတြကိုေပးဖို႔အေကာင္းဆုံးလက္ေဆာင္ျဖစ္တယ္လို႔ေတာင္ၫႊန္းထားပါတယ္။တစ္ကယ္ပဲဒီစာအုပ္ထဲကအတိုင္းမိန္းကေလးေတြအေၾကာင္းဟာ ေရးသားလို႔မကုန္ႏိုင္ဘူးလားဆိုတာ ေျဖခဲ့ပါအုန္း ပရိသတ္ႀကီးေရ….
Previous Article ခြေထောက်နာကျင်နေပေမဲ့ ကိုင်ထားတဲ့ ပါဝါအနီကို အဆုံးထိလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရန် ဂိုးပေါက်ဆီကို ဒူးထောက်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ အပြေးသမား (ရုပ်သံ)
Next Article ရန်ကုန် အင်းစိန်ကုန်းတံတားပေါ်က ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန် ဓားပြတိုက်မှု – What’s Today